के बालबालिकामा जन्मजात थाइराइड समस्या हुन्छ? के-के परीक्षण गर्ने? :: स्वास्थ्यखबर :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
स्वास्थ्यखबर आइतबार, जेठ १, २०७९, ०६:०२:००
प्रश्न: के बालबालिकामा जन्मजात थाइराइड समस्या हुन्छ? के-के परीक्षण गर्ने?
डा विश्वबन्धु बगालेको उत्तर: ‘कनजेनाइटल हाइपोथाइराइडिसम’ अर्थात थाइराइडको जन्मजात समस्या हरेक ३५ सयदेखि ४ हजार नवजातमध्ये एक जनामा हुने समस्या हो। बालबालिकाको मानसिक र शारीरिक विकासमा यो ग्रन्थीबाट निस्कने हर्मोनको प्रत्यक्ष असर पर्ने हुँदा यो समस्याको निदान र उपचारबारे ज्ञान हुनु अत्यन्त जरूरी छ।
किन हुन्छ थाइराइड
थाइराइड ग्रन्थी बन्ने बेलामा कुनै जटिल समस्या भएर अथवा ग्रन्थी नै नबनेका कारणले यसले उत्पादन गर्ने हर्माेनको मात्रा अत्यन्त न्यून अथवा उत्पादन नै नहुँदा जन्मजात रूपमा यो समस्या देखिन्छ। यीमध्ये ८०–९० प्रतिशत नवजातलाई गर्भमै रहेका बेला ग्रन्थी बन्ने समयमा भएका समस्याले यो रोग देखा पर्छ। यसबाहेक आयोडिनको कमी भएका ठाउँहरूमा जन्मिने बालबालिकामा पनि जन्मजात थाइराइडको समस्या देखा पर्छ।
कस्ता समस्या देखिन्छन्
सामान्यतया कुनै एउटा मात्र समस्या वा लक्षणबाट नवजातमा जन्मजात थाइराइडको समस्या भए÷नभएको छुट्याउन सकिँदैन। जन्मेदेखि बिस्तारै शारीरिक मानसिक वृद्धिविकास हुँदै जाने क्रममा देखिने लक्षणका आधारमा विशेषज्ञ चिकित्सकले आवश्यक परीक्षणपछि मात्र यो रोगको पहिचान गर्न सक्छन्।
नवजातमा देखिने लक्षण
– दूध चुस्नमा समस्या
– तालुको भाग ठूलो
– जिब्रो सामान्यभन्दा ठूलो
– छाला फुस्रो र सामान्यभन्दा फरक
– शरीर चिसो हुनु
– रुवाइको आवाज फरक हुनु
– लुलो हुनु
शिशु केही साताको भएपछि देखिने लक्षण
– अनुहारको आकृति अरुभन्दा केही फरह हुनु
– जिब्रो मुखबाहिर निस्कनु
– पेट ठूलो हुनु र फुल्नु
– नाइटोमा हर्निया
– झिझिने र रोइराख्ने
– उमेर अनुसार शारीरिक वृद्धि र मानसिक विकास नहुने
– गलगाँड देखापर्नु
के के परीक्षण गर्ने ?
थाइराइडसम्बन्धी समस्या भए/नभउको यकिन गर्न रगतमा थाइराइड हर्मोनको मात्रा कति छ थाहा पाउनु महत्वपूर्ण हुने भएकाले परीक्षण गर्नु पर्छ। बालबालिकाको उमेर अनुसार थाइराइड हर्मोनको मात्रा फरक हुन्छ। यसबाहेक हातखुट्टाको एक्सरे, घाँटीको अल्ट्रासाउन्ड र सुइबाट थाइराइडको विशेष परीक्षण गर्न सकिन्छ।
नवजातमा थाइराइड हर्मोन कमीको समस्या पहिचान गर्न भारतलगायत अन्य राष्ट्रमा शिशु जन्मनासाथ रगतमा थाइराइड हर्मोनको मात्रा जाँच गरिन्छ। यस्तो जाँच सरकारद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमअन्तर्गत नै गरिन्छ। यो रोगको छिटो पहिचान गर्न सके शिशुमा पर्ने मानसिक र शारीरिक नकारात्मक असर समयमै न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।
थाइराइडबाट हर्मोन उत्पादन नै नहुने अथवा अत्यन्त न्यून उत्पादन हुनुको एकमात्र उपचार विधि हर्मोन नै हो। बालबालिकाको उमेर अनुसार उनीहरूमा हर्मोनको मात्रा फरकफरक हुने हुँदा सम्बन्धित विशेषज्ञ वा बालरोग विशेषज्ञसँग उचित परामर्श र सल्लाह लिनु अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। उपचारको अवधी भने यो किन भयो कारणमा भर पर्छ
समयसमयमा हर्मोन जाँचका साथै बालबालिकाको मानसिक र शारीरिक वृद्धिविकासको अनुगमन यसको उपचारको अर्को अभिन्न पाटो हो।